“म पनि कम छैन” – कपिलबस्तु – Waikhari
गृहपृष्ठ बिचार “म पनि कम छैन” – कपिलबस्तु
“म पनि कम छैन” – कपिलबस्तु
रमेश पौडेल /
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको जिल्ला कपिलबस्तु आज देशकै सबैभन्दा पिछडिएको जिल्लाको रुपमा चिनिदै छ । तिलौराकोट, निगालीकोट, लम्बुसागर ताल, जगदीशपुर ताल, लक्ष्मणघाट, रामघाट, शिवालय मन्दिर, शिवगढी मन्दिर आदिको धनी जिल्ला कपिलबस्तु आफैमा कम छैन । ती प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरुको पहिचान तथा विकास गर्न नसक्दा यो जिल्ला पछाडि परिरहेको छ । गौतम बुद्धको क्रिडास्थलको रुपमा रहेको तिलौराकोट चिरपरिचित छ तर यसको उचित संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न नसक्दा यो ओझेलमा पर्न गएको छ । निगालीकोट जँहा अशोक स्तम्भ भाँचिएको अवस्थामा छ त्यसको पनि संरक्षण हुन सकिरहेको छैन ।
स्रोत र साधनको तुलना गर्दा लुम्बिनीभन्दा कम छैनन् यँहाका ऐतिहासिक स्थानहरु तर यसको विकास गरेर पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न नसक्दा दुर्भाग्यको शिकार बन्नु परेको छ । उदाहरणका लागि लम्बुसागर ताललाई लिन सकिन्छ । लम्बुसागर तालको सुन्दरता, बनावट, र मनोहारितालाई हेर्दा कसको मन लोभिन्न होला र ? यसलाई चिनाउन नसक्दा आज यो ताल मात्र कुवाको भ्यागुतो सरी बन्न पुगेको छ । अझ यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि त झनै रोचक छ । त्यँहा शाक्य वंशी राजाहरुको दरबार भएको मानिन्छ । शाक्य वंशी खान्दानमा गौतम खान्दानका छोराले विवाहको प्रस्ताव राखेपछि छलकपटले शाक्य खान्दानले नोकर्नीसँग बिहे गरिदिएका थिए । सो कुरा थाहा पाएपछि गौतम खान्दानले युद्ध छेडेका थिए । जसमा गौतमहरुले ७० हजार शाक्यहरुलाई बद् गरेर एउटै कुण्डमा फ्याकिदिएका थिए । त्यो कुण्ड जीर्ण अवस्थामा अहिले पनि त्यँहा देख्न सकिन्छ । यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको यो ताल पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै उपयूक्त रहेको छ ।
त्यसकै नजिक उत्तर दिशामा रहेको जगदीशपुर ताल कम महत्वपूर्ण छैन । यस ताललाई स्थानीय समुदायमा जखिरा नामले चिनिइन्छ । एसियाकै ठूलो कृतिम तालका रुपमा यो प्रसिद्ध छ । त्यस्तै सिमसार क्षेत्रका रुपमा पनि यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत रहेको छ । यस तालको पनि उचित संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासको कमीले यसले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । भारतसम्म सिचाइ गर्न सफल यो ताल जलभण्डारको रुपमा मात्र सीमित छ । यस तालको संरक्षण तथा विकासका लागि अहिले त्यँहाका स्थानीय युवाहरुले डाइनामिक जगदीशपुर ताल संरक्षण संस्था गठन गरेर तालमा सरसफाइ, चरा तस्करी नियन्त्रण , डुङ्गा सञ्चालन जस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन् जुन प्रशंसनीय रहेको छ । स्मरण रहोस विभिन्न समयमा विश्वका विभिन्न देशहरुबाट वर्षेनी थरीथरीका चराचुरुङ्गीहरु यँहा आउने गर्दछन् । त्यसैगरी प्रसिद्ध बोलबम धामका रुपमा रहेको लक्ष्मणघाट धाम धार्मिक महत्व बोकेको स्थान हो ।
यसरी धार्मिक तथा ऐतिहासिक रुपले महत्वपूर्ण जिल्ला कपिलबस्तु आफैमा कम छैन तर दुर्भाग्यको शिकार बारम्बार भइरहेको छ । यँहाका नेतृत्वकर्ताले चासो नदेखाउँदा कपिलबस्तु आज रोइरहेको छ । आन्तरिक क्षमतालाई देखाउँदै छाती ठोकेर भनिरहेछ, “ म पनि कम छैन ” तर यो रोदन कसले सुन्ने ? बाह्य रुपमा काँचुली फेर्न नसक्दा जस्ताको तस्तै सधैभरी । सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा समयमै चासा नदेखाए त्योभन्दा ठूलो अभिशाप केही हुने छैन यो जिल्ला साथै देशलाई पनि……।